चर्चा कमाउनका लागि पुस्तक लेख्दिन : अच्युत कोइराला - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
चर्चा कमाउनका लागि पुस्तक लेख्दिन : अच्युत कोइराला
विराटनगरमा जन्मिएर विराट नगरकै एक पत्रिकाबाट पत्रकारिता सुरु गरेका अच्युत कोइरालाले हालसम्म एक दर्जन पुस्तक लेखे । काठमाडौं आएपछि कामना मासिकबाट चलचित्र पत्रकारिता सुरु गरेका उनले आहा ! संगीत पत्रिका चलाए । विविध कारणले पत्रिका बन्द भएपछि साइबर संसार हुँदै अहिले बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट निस्कने नेपाली पत्रमा सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
चलचित्र समिक्षक समाजका उपाध्यक्षसमेत रहेका कोइरालाले कागवेनी, मिसन पैसा र झिङ्ग्राना फिल्म पनि लेखे । अनुवाद, अनुसन्धान र पत्रकारिताका विषयमा दख्खल उनको भर्खरै प्रकाशित ‘नरेन्द्र मोदी, राजनीतिका एक चाणक्य’ले यतिबेला सबैतिर चर्चा पाइरहेको छ । सरल, खुलस्त र जानेको कुरा भन्न रुचाउने कोइरालासँग समुन्द्रराज घिमिरेको कुराकानी ः–
१.नरेन्द्रमोदीले नेपालमा राम्रो प्रभाव छोडे तर उनकै बारेमा पुस्तक लेख्ने तपाईको चर्चा त भएन नि ?
एउटा कुरा के हो भने म चर्चाका लागि पुस्तक लेख्दिनँ । मलाई मोदी आएका बेला उनलाई पुस्तक दिएर फोटो खिचाउने रहर पनि होइन । मेरो उद्देश्य के हो भने विश्वमा तरंग ल्याउन सक्ने हरेक व्यक्तिको जानकारी नेपालीले पाउनुपर्छ ।
२.मोदी आउने समयमा नै तपाईको पुस्तक निस्कियो र पुस्तक चर्चित पनि भयो । कतै पुस्तक बिकाउने फण्डा त थिएन ?
हामी नेपालीको दिमागमा यति नकारात्मकता सिञ्चित छ कि हामी हरेक कुरामा नकारात्मक मात्र देख्छौं । म पहिलेदेखि नै अलि जिज्ञासु भएकाले संसारमा के भइरहेको छ बुझ्न चाहन्थें । मलाई मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा नै प्रभाव पारेका थिए । उनीबारे विभिन्न कुरा खोजिरहँदा उनी चाणक्य जतिकै पाएँ । भाजपाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेपछि उनीबारे निस्किएका पुस्तक, लेख र युट्युबमा भएका ८० घण्टा लामो भिडियो हेरेर उनको बारेमा पुस्तक तयार पारे । यो तयार गर्न मलाई तीन महिनाभन्दा बढी लाग्यो ।
३.तपाई पुस्तक अनुवाद पनि गर्नुहुन्छ तर अनुवादित पुस्तक चर्चित हुँदैन किन ?
एक त प्रकाशकसँग प्रयाप्त पुँजी हुँदैन । किनभने राम्रो ठहरिएका पुस्तक अनुवादन गर्नका लागि वैधानिक अनुमति प्राप्त गर्न महँगो रोयल्टी तिर्नु पर्छ । अर्को कुरा नेपालमा सकारात्मक कुरा पढ्ने बानीको विकास भइसकेको छैन ।
४.अनुवादक पनि गुमनाम नै हुन्छन् नि ?
पुस्तक चर्चित नभएपछि अनुवादक कसरी चर्चित हुन्छ र ? नेपालमा के छ भने अनुवादनलाई श्रमका रुपमा हेरिनु अनुवादको ठूलो समस्या हो । पैसाको लागिमात्र काम गरिएकाले यो समस्या भएको हो । अर्को कुरा के छ भने हामीले हाम्रो कुरालाई प्रशंसा गर्ने संस्कृति नै छैन भने अर्कोतिर अनुवादित पुस्तकलाई कृति नै ठानिँदैन ।
५.अनुवादक कस्तो हुनुपर्छ ?
मेरो विचारमा अनुवादक श्रमिक होईन सर्जक हुनुपर्छ । भाषा जानेको भरमा नेपालीमा उल्था गर्दैमा अनुवादक भइने परिपाटीले उसको इज्जत पनि हुँदैन ऊ सिर्फ भाषा अनुवादनको कामदारमा मात्र रहन्छ । सबै नेपालीले अंग्रेजी नजान्ने र विदेशी पुस्तक महँगो पर्ने भएकाले पुस्तकको ‘जिष्ट’ कुरा पाठकलाई नेपाली गन्धमा बुझाउने हो ।
७. स्टिभ जब्स, अल्बल्र्ट आइन्स्टाइन, आङसाङ सुकी लगायत एक दर्जन व्यक्तिमाथिको लेखन शैलीमा राम्ररी चिनिनु भयो, तपाईको खास इच्छा चाहीँ के हो ?
मैले अघि नै भने चाहे अनुसन्धान गरेर लेख्नु वा कसैले लेखिसकेको पुस्तक अनुवाद गरौं, मेरो इच्छा भनेको त्यसमा एउटा लेखकको शिल्प जोड्नु हो । एक्स्ट्रा पावर भएका सयजना व्यक्तिहरू बारे पुस्तक लेख्ने सपना हो । त्यसको लागि म रिसर्चमा छु ।
८.कसैको जीवनी भन्दा आख्यान बढी पढिनुको कारण के होला ?
नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै सानैदेखि काल्पनिक कथा सुनाइन्छन् । लार्जर देन लाईफका ती कथाले मानिसमा कल्पनाका कुरामा बढी मज्जा लिने शैलीको विकास हुन्छ । फलस्वरुप गैर आख्यान भन्दा आख्यानमा मन स्वतः बस्छ । यदि कसैको जीवनीलाई पनि मिठास शैलीमा प्रस्तुत गरिने हो भने जीवनी पढ्ने बानी बस्न सक्छ ।
९. कुनै पुस्तक अनुवाद गर्दा परेको अप्ठ्यारो कुनै छ ?
म पत्रकारिता पेशामा भएकाले पनि हुन सक्छ, मलाई नयाँ कुराको जानकारी हुन्छ र रोचक विषय वा पुस्तकका बारेमा अध्ययन गर्छु । अध्ययन गरेर उत्कृष्ट लागेका विषयलाई पुस्तकमा उतार्ने क्रममा ‘थ्यांक गड’ भन्ने पुस्तकको अनुवाद अनुमति माग्दा लेखक महँगो रोयाल्टी र नेपालमा कार्यक्रम गराउनु पर्ने शर्त राखे । यस्तै धेरै पुस्तकका बारेमा अनुमति माग्दा कि राम्रो प्रतिउत्तर दिँदैनन् कि त रोयाल्टी धेरै माग्छन् ।
१०. तपाईको परिचय त विस्तृत छ, खास तपाई आफुलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
म पत्रकार हुँ । कसैले मलाई लेखक भने म आफुलाई पत्रकार बन्न जिज्ञासु र लेखक कला राम्रो भएको हुनुपर्छ, त्यो अवस्था पूर्ण भयो भने लेखक पनि बन्न सक्छु ।
११. आख्यानबारे पनि योजना छ ?
मलाई के लाग्छ भने हरेक लेखकले आख्यान लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । एउटा उपन्यास निकाल्न सबै कुरा अन्तिम तयारीमा थिएँ । तर मलाई के लाग्यो भने आख्यान पर्याप्त छन् र जति छन् ती पनि पर्याप्त छन् । कुनै दिन आवश्यक ठहरिए यो पुस्तक निस्कन सक्छ ।